Umthandazo waseKhatholika wasekuseni Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ngokuvumela uThixo ukuba angene kuthi, imizimba yethu iyakulungela ukuhamba. Kungenxa yoko le nto kweli nqaku sikunika i Umthandazo waseKhatholika wasekuseni.
1 Umthandazo waseKatolika wasekuseni
1.1 # 1 Umthandazo waseKhatholika wasekuseni
1.2 # 2 Ekuqaleni kosuku
1.3 # 3 INdumiso 5
Umthandazo waseKatolika wasekuseni
Ukomeleza ubudlelwane esinabo noThixo, ngalinye lamaKristu liphethe ukuthatha ixesha labo lemihla ngemihla kunye nokulinikezela kwiNkosi yethu. Inkqubo ye- Umthandazo waseKhatholika wasekuseniNjengoko igama layo lisitsho, iyakuqhutywa xa siphakama ukuze iNkosi yethu ibe yiyo ehamba nathi kwinqanaba ngalinye elithathiweyo emini.
# 1 Umthandazo waseKhatholika wasekuseni
«Nkosi, ekuthuleni kwale nto Usuku lokuzalwa, vNdicela uxolo, ubulumko kunye namandla. Namhlanje ndifuna ukujonga el mundo ngamehlo agcwele uthando; yiba nomonde, uqonde, ubaphathe kakuhle kwaye ulunge. Jonga emva kokubonakala Kubantwana bakho, njengoko ubabona ngokwakho, pUkuze sikuxabise ukulunga komntu ngamnye.
Ndivale iindlebe zam kuko konke ukumbombozela, Lulondoloze ulwimi lwam kuko konke ukunyelisa. Oko kuphela ziingcinga ezithi sikelela ukuhlala kum. Ndifuna ukuba neenjongo ezintle kunye nobulungisa Ngamana bonke abeza kum bangabuva ubukho bakho. Ndambathe ukulunga kwakho; Nkosi yam, uze undibonise ngale mini. "
# 2 Ekuqaleni kosuku
«Nkosi Somandla Thixo, ndiyabulela ngale mini intsha, kuba ngale mini intsha ndinethuba lokusondela kuwe, ndikukhonze ngcono kunayizolo. Ndiyabulela usapho lwam, izihlobo zam nangazo zonke izinto osele uzibekile phambi kwam ukuze zilunge kum. Ngcwalise iNkosi ngoMoya wakho oyiNgcwele, onke amanyathelo endiwathathayo, ukuze ngawo ndibonakalise ubuqaqawuli bakho kunye namandla abo endihlangana nabo endleleni.
INkosi uYesu Krestu isikelele imilebe yam ukuze ingqinele inceba nothando lwakho; INkosi uYesu Kristu uthambise izandla zam ngesiqhumiso sokuthobela kwakho uMthetho, ukuze basikelele umsebenzi wam; vula amehlo am ukuze babubone ubungangamsha bakho kwaye ke bakwazi ukuba nawe njengokhanyiso olunika ingcaciso kuzo zonke izigqibo endizithathayo namhlanje.
Ngamana ngobabalo lwakho intliziyo yam ingavuya ngohlobo lokuba indalo iphela yazi ukuba ndingumkhonzi wakho, kwaye ngokuthobekileyo ndisebenze njengesixhobo soXolo lwakho oluNgcwele. Ndikunika intliziyo yam, iingcinga zam kunye nobuntu bam bonke ukuze ubuguqule bube ngumfuziselo wakho, ukuze ke ndibenakho ukufana nawe kulunge abantu bakho, nangenxa yozuko lwegama lakho elingcwele. Sikucela oku egameni elingcwele likaYesu Krestu iNkosi yethu. Amen. "
# 3 INdumiso 5
«Xa ukukhanya kwemini kuchukumisa amehlo am, Nkosi, Intliziyo yam inyukela kuwe ifuna ujonge. Yiva amazwi abo baziva bephila kwakhona, Mamela, Nkosi; kufutshane nesandla sam esivulekileyo, Nika impendulo kumbuzo wam; ndincede ekukhathazekeni kwam, Wena uyiNkosi yam, ndikholose ngaye.
Ndivula ubukho bam kuwe, ukuthanda kwam ukuphila, ukuvuka kwam; ngomso ezandleni zenu ndibeka uloyiko lwam, iingcinga zam; kusasa, ndibeka ubunyulu okanye ukunyaniseka kophando lwam. Kusasa endleleni yakho, Ndifuna ukuqondisa imikhondo yam. Yiva ilizwi lam, Nkosi, ulungile kwaye unemfesane kwaye ukhuthaze ubomi bam obufuna ukukhanya nobushushu kuwe.
Khangela, Nkosi, ntliziyo yam ihlwempuzekileyo, ukuba njengongqatyana ufuna indawo yokuhlala ezandleni zakho, thatha udongwe lwam ulubumbe ngokwamaprojekthi ondenzele wona namhla.Ndifuna ukuba phambi kwamehlo akho kwaye uzivumele ungene ; Phambi kwamehlo akho, Nkosi, ndiziva ndincinci, kwaye ndonakele. Ekuqaleni kwentsasa, galela ububele bakho nobubele ukuze intliziyo yam yomelele kwaye ikhaliphe.
Nkosi, susa ububi obundirhangqileyo endleleni yam, ungavumeli ubuxoki bundibambe namhla. Ndinike ubulali nokuthobeka ukuze intliziyo yam, Nkosi, ingabinobundlobongela namhlanje okanye yenze izinto ezimdaka nakubani na. Ndiyathemba kubuninzi bothando lwakho kwaye ndihamba ndisiya kuwe ngokuqinileyo ukuba undamkele ekhayeni lakho. Yenza. Nkosi, ngamana ndingahamba ebusweni bakho namhlanje kwaye ndoyike ukushiya.
Ndikhokele, Ndikhoyo, wena olungileyo ungcwele; ndikhokelele ekukhanyeni kwaye ndingahamba njengomntwana wokukhanya; ndikhaphe, ndihebe indlela yam, ukuze ndithembeke emyalelweni wakho. Kwaye indlela yakho, Nkosi, ngamana ukuthanda kwentliziyo yam encinci kube namhlanje, kwaye wanga uMoya oyiNgcwele angandinceda kuwo onke amanyathelo. Ngamana umlomo wam, Nkosi, ungabonakalisa ingaphakathi lam namhlanje; Ngamana amazwi am angaqala enzonzobileni kwaye abe yinyaniso.
Nkosi, ndinike intliziyo ecocekileyo ukuze ndikwazi ukukubona, Nkosi, ndinike intliziyo ehluphekileyo ukuze ubukumkani bakho buphile namhlanje, Nkosi, ndinike intliziyo enenceba, ukuze ndithulule inceba, Nkosi, ndinike intliziyo Ugcwele uxolo, ukuze ibe ngunyana wakho, Nkosi, ndinike intliziyo elambela ndinxanelwe ubulungisa ukuze yaneliswe kwaye yenze intando yakho;
Nkosi, ndiphe intliziyo elulamileyo, ndiwudle ilifa umhlaba; Mayivuye intliziyo yam, igcobe namhlanje, ngokuba ndilindele yonke into kuwe, Thixo wam.
Ndikwanga, Nkosi, ekuqaleni kosuku, ndikhusele. Ndithembele kuwe njengomntwana ebomini bakhe, ndincede. Kuwe ndivula iiprojekthi zam kunye nezicwangciso zalo mhla, ndijoyine kuwe Ndinikela into endiyiyo nento endinayo, ndiyamkele.
Kuwe onguThixo wobomi, ndicela amandla akho, ndikhuthaze. Intliziyo yam iyakuthanda kwaye, izele luvuyo, iyagcoba ngawe.
Ndisikelele, Yehova, Ndikhokele endleleni elungileyo, Ndikhusele njengekhaka elikhulu, yiba amandla am. Ngamana amaphiko akho, Nkosi, undikhusele kwaye ndisaphila nanamhlanje. "
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo kuSanta Raphael iNgelosi enkulu.